HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
“Andriamanitra akia mahalala izay tena mahasoa antsika a! ... Aza mitomany intsony an!”
Tany am-pandevenana ny dadany ny vehivavy atao hoe Niry * no nisy nibitsibitsika an’ireo teny ireo. Maty tamin’ny lozam-piarakodia mantsy ilay dadany.
Tena nifankatia be i Niry sy ny dadany. Naman’ny fianakaviany no niteny an’ireo teny ireo taminy, ary nieritreritra ilay olona hoe hampionona azy ilay izy. Vao mainka anefa i Niry nalahelo be. Nieritreritra foana izy hoe: “Inona koa izao no mahatsara ny nahafatesany?” Nosoratan’i Niry tao anaty boky ilay zava-nitranga taona maro tatỳ aoriana, ary hita hoe mbola nalahelo be foana izy.
Hitantsika tamin’izay nanjo an’i Niry fa mety ho ela be vao afaka ny alahelo, indrindra raha nifankatia be ianao sy ilay olona maty. Mety tsara ny ilazan’ny Baiboly hoe “fahavalo farany” ny fahafatesana. (1 Korintianina 15:26) Tsy misy mahasakana azy io mantsy, ary matetika no tsy vonona hiatrika an’ilay izy akory isika. Lasa mikorontana ny fiainantsika ary sarahiny amintsika ny olona tena tiantsika. Tsy misy afa-miala amin’ny voka-dratsiny koa isika. Tsy mahagaga àry raha tsy haintsika izay atao rehefa mitranga izy io, ary tsy vitantsika ny mizaka ny alahelontsika.
Angamba ianao efa nieritreritra hoe: ‘Rahoviana àry vao ho afaka ny alahelo, rehefa misy maty? Inona no azo atao mba hizakana ny alahelo? Ahoana no hampiononana olona nidonam-pahoriana? Mbola ho velona indray ve ireo havantsika efa maty?’
^ feh. 4 Novana ny anarana.
Diso ve Ianao Raha Malahelo Be?
Inona no azonao atao raha misy olona mieritreritra fa tafahoatra loatra ny alahelonao?